【फ्रिजको सरसफाई गर्ने गर्नु भएको छ?】
जुन महिना अत्याधिक वर्षा हुने चुयु अर्थात् वर्षायामको मौसम होI त्यसपछि गर्मी मौसम शुरु हुन्छI यसपछिको समयमा बिशेष गरि ध्यान दिनु पर्ने भनेको खाद्य विषाक्तता हो।
फ्रिजभित्र पनि राम्ररी सफा गर्ने र म्याद सकिएको खाद्य सामग्रीहरु छ छैन जाँच गर्ने गरौं।
साथै, भान्छामा काट्न प्रयोग गर्ने बोर्ड, स्पन्ज, पानीको प्रयोग हुने ठाउँ वरिपरि जस्तै कि, हात धुने ठाउँ वा भाँडा माझ्ने ठाउँ आदि जस्तोमा, विशेष गरी यस समयमा कीटाणुरहित गर्नमा बढी ध्यान दिनु राम्रो होला।
हल्का अल्कालीक बेकिंग सोडाले भिजाएको कपडाले फ्रिजको भित्री भाग पुछ्ने, वा भान्छा सफा गर्न प्रयोग हुने अल्कोहल स्प्रेबाट पनि किटाणु हटाउन सकिन्छ। साथै, स्पन्ज र काट्ने बोर्डलाई हल्का ब्लीचमा भिजाएर वा ९० डिग्री सेल्सियसमा उम्लेको पानीले पनि किटाणु मार्न प्रभावकारी हुन्छ।
बाल भत्ता सम्बन्धि
फुकुओका शहरमा, जुनियर हाईस्कूलसम्मका बच्चाहरुलाई हुर्काउँदै गरेको व्यक्तिहरुलाई बाल भत्ता प्रदान गरिंदै आइरहेको छ।
भत्ता रकम, बच्चाको उमेर वा तपाईंको आम्दानी अनुसार प्रति बालक, महिनाको ५,००० देखि १५,००० येन हो।
४ महिनाको एकमुष्ठ रकम; जुन, अक्टोबर र फेब्रुअरी महिनाहरूमा भुक्तानी गरिनेछ।
यस बाल भत्ता प्रणाली अन्तर्गत, अक्टोबरदखि भुक्तानी गरिने भत्ता रकममा आंशिक परिवर्तन भएको छ।
लाभको लागि आयको सीमा तोकिएको छ र आयको आधारमा भत्ता भुक्तान नहुन पनि सक्छ।
यस अतिरिक्त, वर्षको एकपटक बुझाउनु पर्ने वर्तमान स्थिति रिपोर्ट (गेन्क्योउ तोदोके) पेश गर्न नपर्ने भएको छ।
यद्यपि, विबाह गर्नु हुने वा श्रीमान्/श्रीमतीबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्नु हुने महानुभावहरुले परिवर्तन सम्बन्धि सूचना दिन भने आवश्यक छ।
लाभार्थीहरूलाई, मे १० मा बाल भत्ता प्रणालीमा भएको परिवर्तनको बारेमा सूचना पठाएका छौँ। कृपया जाँच गर्नुहोला।
जनवरी १ देखि फुकुओकामा बस्दै आउनुभएको व्यक्तिको यदि अघिल्लो वर्षको आय १० लाख नाघेको भएमा फुकुओका प्रान्तको कर तिर्नु पर्ने हुन सक्दछ।
जुन १५ तिर कर तिर्न सूचना आउन सक्ने भएकोले अवश्य पनि खामभित्र हेर्नुहोला। तिर्नुपर्ने म्याद र शुल्क लेखिएको हुन्छ।
शहरी कर तिर्नु भएन भने, तपाईंको निवास कार्डको नविकरण गर्नमा समस्या पर्नुका साथै तपाईंको सम्पत्ति फुकुओका शहरले जपत गर्ने सम्भावना हुन सक्दछ।
【प्रकाशित सामग्रीहरुको सम्पर्कमा आउने, पठन सप्ताह】
शान्त र आरामदायी शरद ऋतु पढ्नको लागी एकदम उपयुक्त मानिन्छ।
सन् १९४७ मा, अमेरिकाको पठन सप्ताहलाई आधार मानेर, जापानमा पनि पठन सप्ताह शुरू गरिएको थियो। यसको प्रतिक्रिया राम्रो भएकोले अर्को बर्षबाट नोभेम्बर ३ को "सांस्कृतिक दिवस" लाई केन्द्रित गरि, दुई हप्ताको कार्यक्रमको रूपमा पठन सप्ताह स्थापित भएको थियो। "उल्लू" लाई पठन सप्ताहको प्रतीक चिन्हको रूपमा लिईन्छ।
एक समय, ग्रीकको पौराणिक कथाहरुमा, उल्लूलाई सौन्दर्यको देवी एथेनाको दूत मानिन्थ्यो । उनी शिक्षा, कला, र बुद्धिका प्रमुख देवी थिईन्। उहिलेका ग्रीकहरुले बुद्धिमानी देखिने गोलो आँखा भई राम्रो अनुहार भएको उल्लूलाई बुद्धिको प्रतीकको रुपमा कदर गर्थे।
किताब पसलमा जाने समय नभएका व्यक्तिहरुले, फुकुओका सिटि इलेक्ट्रोनिक पुस्तकालयको प्रयोग गरेर हेर्दा कसो होला ? इन्टरनेटमा दर्ता गरेर, कम्प्यूटर, स्मार्टफोन, वा ट्याब्लेटमा, तपाईं आफूलाई मनपर्ने किताबहरु पढ्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि यसको प्रयोग गरेर हेर्नु होला है।
【साईकल“ चलाउने नियम　सम्बन्धि】
प्रायःजसो दैनिक रुपमा साईकल चलाउँछु भन्ने व्यक्तिहरु धेरै हुनुहुन्छ होला ।
के तपाईंहरुलाई साईकल चलाउने तरिका र नियमको बारेमा थाहा छ?
नयाँ कोरोनाभाइरसको प्रभावको कारण, सान्मिचु (तीन कुरा बन्द) बाट टाढा रहन प्रोत्साहन गर्ने साईकललाई, नियम पालन गरि चलाउने गरौँ।
जापानमा सैद्धान्तिक रूपमा साईकल, मोटर-बाटोको बायाँ पट्टिबाट चलाउनु पर्छI
साईकल सडकमा राखिएको पाईएमा, हटाइने हुनाले, साईकल पार्किंग स्थलमा पार्क गर्नुपर्छ।
दुई जना चढ्ने र समानान्तर रूपमा सँगसँगै साईकल चलाउन निषेध छ।
साथै, साईकलको हकमा पनि मादक पदार्थ सेवन गरी नचलाऔं।
छाता ओढेर चलाउने, मोबाइल फोन वा हेड फोन प्रयोग गरेर साईकल चलाउने गर्दा, दुर्घटनाको खतरा हुने भएकोले यस्ता कार्यहरु नगरौं।
यस अतिरिक्त, गत वर्षको अक्टोबरदेखि, फुकुओका शहरमा साईकल चालकहरूले साईकल बीमामा अनिवार्य सामेल हुनु पर्ने गरिएको छ। साईकल दुर्घटना भयो भने, तपाईंले दुर्घटनामा परेको व्यक्तिलाई धेरै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, यदि तपाईंसँग साइकल बीमा छ भने, उदाहरणका लागि, तपाईं साइकल चलाउँदै गर्दा, यदि कसैलाई चोटपटक लाग्न गएमा, तपाईंको पक्षबाट औषधि उपचारको लागि भुक्तानी गरिनेछ।
हुन सक्ने दुर्घटनाको क्षतिपुर्तीबाट बच्न, साइकल बीमा लिऔं।
अवश्य पनि, ट्राफिक नियमहरूको पालना गर्ने गरौं!
साईकल चलाउँदा हतार नगरी ध्यानपूर्वक चलाउने गरौं।
【Share Cycle Service - Charichari को परिचय】
फुकुओका शहरले Share Cycle Service अर्थात् Charichari (च्यारीच्यारी) शुरु गरेको छ।
अहिले साइकल पोर्टहरु, शहरभित्र ३७० भन्दा बढी छन्, र प्रयोग गर्न सकिने एरिया पनि विस्तार गरिएको छ।
Charichari को app प्रयोग गरी साइकल भाँडामा लिनुहोस् र प्रयोग गरिसकेपछि, गन्तव्यको नजिकको पोर्टमा फिर्ता गर्नुहोस्।
शुल्क, प्रति मिनेट ६ येन हो। जस्तै कि, यदि तपाईं १० मिनेटमा तेन्जिनबाट हाकाता स्टेशनमा पुग्नुभयो भने, तपाईंले ६० येनमा साइकल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। नहिच्किचाईकन यसको प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्I
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.73
【सुइका अर्थात् खर्बुजा】
सुइका अर्थात् खर्बुजा, तपाईंहरु प्रायःजसोले खानुभएको नै छ होला। खर्बुजामा पोटाशियम, क्याल्शियम, म्याग्नीशियम, इत्यादि भई पौष्टिक हुन्छ। यसमा अलिकति नुन छर्केर खानुभयो भने स्पोर्ट्स ड्रिंकको जस्तो काम गर्छ।
यस फलमा पानीको मात्रा धेरै हुने भएकोले, अत्याधिक गर्मीबाट बच्नका लागि पनि उपयुक्त हुन्छ।
प्रति १०० ग्राममा ३७ क्यालोरी, भन्नाले कम क्यालोरी हुनु यसको अर्को बिशेषता हो।
क्युशुमा यसको मुख्य उत्पादन क्षेत्र, कुमामोटो प्रान्त हो, जसले जापानकै सबैभन्दा ठूलो उत्पादन खण्डलाई ओगटेको छ।
फुकुओका शहरमा चाहिं निशी वार्डमा मात्र खर्बुजाको उत्पादन गरिंदै आईरहेको छ।
ब्रान्डको नाम "किताजाकी सुइका" हो।
यदि तपाईंहरुले सुपरमार्केटमा खर्बुजा देख्नुभएमा, उत्पादन क्षेत्रहरूको तुलना गरेर हर्न पनि रोचक हुन सक्ला कि।
【मापसे ड्राइभिंग उन्मूलनको बारेमा】
तपाईंहरुलाई, २००६ अगस्त २५ मा फुकुओका शहरमा घटेको, मदिरा सेवन सवारी दुर्घटनाको बारेमा थाहा छ?
हिगासी वार्डको "उमि नो नाका मिची ओहाशी" मा, मापसे गरि सवारी चलाउँदा, तीन जना बच्चाहरुको ज्यान जाने गरि दुर्घटना भएको यस वर्षबाट १५ वर्ष पुग्यो।
फुकुओका शहरमा, यस दुर्घटनाको कारण, मादक पदार्थ सेवन गरि सवारी चलाउन रोक्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आईरहेको छ।
तर पनि यो अहिलेसम्म रोकिएको छैन। २०२० मा, मापसेका कारण ३१ वटा दुर्घटनाहरू भएको पाईन्छ।
मदिरा सेवन गरि गाडी चलाउनु अपराध हो।
मदिराको सेवन गरेपछि कार, मोपेड, वा साइकल नचलाउनुहोस्।
मदिराको सेवन गरेको व्यक्तिलाई कार भाँडामा दिने वा गाडी चलाउने व्यक्तिलाई रक्सी पिउन प्रोत्साहन नगर्नुहोस्।
साथै, सवारी चालकले मदिराको सेवन गरेको थाहा पाउँदा, त्यस कारमा नचढ्नुहोस्।
सुरक्षित ड्राइभिंगका लागि आवश्यक पर्ने ध्यान र निर्णय कम हुनेछ।
अत्यधिक गति र खतरा पत्ता लगाउन ढिलाइ हुनेछ।
ब्रेक पेडल थिच्न लामो समय लिनेछ।
साथै, निम्न किसिमको गाडी मदिरा सेवन गरि चलाएको हुन सक्छ। यदि देख्नु भएमा, कृपया ११० नम्बरमा फोन गर्नुहोस्।
ट्राफिक लाइट रोकिंदा, गाडी स्टप लाइनभन्दा केही अगाडि रोकिन्दा
ट्राफिक लाइट हरियो भएता पनि, गाडी सजिलैसँग शुरु नहुँदा
गाडी अचानक शुरू र अचानक गति दोहोर्याउँदा
"मदिरा सेवन गरि गाडी नचलाऔं, चलाउन नदिऔं, गर्नेलाई माफी नदिऔं र बेवास्ता नगरौं" भन्ने दृढ इच्छाशक्ति प्रत्येक व्यक्तिमा हुनु आवश्यक छ।
सबैले मापसे ड्राइभिंगलाई बन्द गरौँ!